फेरी ६० प्रतिशत भाग लिएर एमालेसँग एकता गर्दै प्रचण्ड ! - jagritikhabar.com
फेरी ६० प्रतिशत भाग लिएर एमालेसँग एकता गर्दै प्रचण्ड !
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमाले भित्र धेरै नेता इमान्दार रहेको बताउनुभएको छ ।
बिहीबार आफ्नै निवास खुमलटारमा आयोजित माओवादी ध्रुवी करण तथा एकता कार्यक्रममा उहाँले एमालेभित्रका इमान्दार नेता
कार्यकर्ताको नेतृत्व पनि एकदिन आफूले गर्ने जिकिर गर्नु भयो ।एमालेका सबै खराब छन् भन्ने पनि सोच्नुहुँदैन,’
प्रचण्ड ले भन्नुभयो, ‘एमालेभित्र तीन वर्ष हेर्‍यौं नि हामीले को–को क स्ता रहेछन् भन्ने । त्यहाँ पनि ८० प्रतिशत भन्दा बढी इमान्दार कम्युनिष्ट नै छन् ।
उहाँले ‘प्रतिक्रियावादी, प्रतिगम नकारी प्रवृत्तिको नेतृत्वका बन्दी भएका छन्, हामीले तीनलाई मुक्त गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
प्रचण्डले एमालेसँग एकीकरण गर्दा ६० प्रतिशत भाग आफूह रुले पाएको भए पार्टी नफुट्ने समेत दावी गर्नुभयो ।
‘परार एमालेसँग एकता गर्दा माओवादी नफुटेको हुन्थ्यो भने हा मीले ६०–४० लिन्थ्यौं ।
त्यस्तो हुन्थ्यो भने पार्टी फुट्दैन्थ्यो । हामी साँच्चै समाजवादतिर लिएर जान्थ्यौं’ उहाँले भन्नुभयो ।
पू्र्व माओवादीहरुबीच ध्रुवीकरण आवश्यक रहेको भन्दै प्रचण्ड ले त्यो मात्रै पर्याप्त भने नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले माओवादीहरुलाई ध्रुवीकृत गर्नुको अर्थ माओवादीलाई मात्रै भन्ने बुझ्नुहुन्न ।
हामीले सबै कम्यु निष्टलाई एकीकृत गरेर समाजवादसम्म पुग्ने हो । तर, त्यस को सुरुवात माओवादीहरुबीच ध्रुवीकरण गरेर नै गर्ने हो ।’
यतिबेला चौतर्फी चर्चाको केन्द्र बनेका छन् र्‍यापर बालेन साह । काठमाडौंं महानगरपालिकाको मेयरको दौडमा रहेका उनी अहिलेसम्मको मतगणनामा सबैभन्दा अगाडि छन् ।
अन्तिम मत परिणामसम्म उनको अग्रता यही हिसाबले कायम रह्यो भने उनी मेयरमा विजयी हुनेछन् ।
काठमाडौंं महानगरको मेयरमा बालेनको अग्रता मात्र कहाँ हो र ? यो स्थानीय निर्वाचनमा देशको विभिन्न स्थानबाट समेत कलाकारले जित हासिल गरेका छन् ।
अभिनेता राज घिमिरे (सानु राजा घिमिरे) गोदावरी नगरपालिका वडा नं ३ को वडाध्यक्षमा विजयी भएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष उम्मेदवार बनेका उनी १०५९ मत सहित निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका राम आचार्यलाई जम्मा १० मतले हराए । घिमिरे अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा यसै वडामा पराजित भएका थिए ।
घिमिरेले अध्यक्षको हैसियतले पाउने कुनैपनि सरकारी सुविधा नलिने घोषणा समेत गरिसकेका छन् ।
उनले आफूले पाउने सेवा सुविधा गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको अध्ययनमा खर्च गर्ने बताए ।
फिल्म ‘चपली हाइट’ बाट अभिनेताको रूपमा चिनिएका उनी पछिल्लो समय समाजसेवामा सक्रिय छन् । उनी थुप्रै म्युजिक भिडियोमा पनि देखिएका छन् ।
फिल्म निर्देशक मुनाल घिमिरे (मधुसूदन शर्मा) पनि वडाध्यक्षमा विजयी भएका छन् । एमालेबाट उम्मेदवार बनेका उनी दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–४ को वडाध्यक्षमा विजयी भएका हुन् ।
घिमिरे १५२५ मत ल्याएर विजयी घोषित हुँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका नारायण जिएमले भने १४३३ मत प्राप्त गरे ।
फिल्म ‘आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ’को निर्माणसमेत गरेका उनले ‘खबरदार’, ‘इच्छा’ फिल्म निर्देशन गरेका छन् ।
‘डिठ्ठा साहेब’ को नामले परिचित हास्य कलाकार किशोर भण्डारी नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट तारकेश्वर नगरपालिका–२ मा वडा सदस्यमा विजयी भएका छन् ।
कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारित सिरियल ‘डिठ्ठा साहेब’ लगायत दर्जनौ टेलिसिरियल अभिनय गरेका भण्डारी पछिल्लो समय ‘हर्के हवल्दार’मा समेत देखिँदै आएका छन् । उनले केही फिल्मका निर्देशन गरेका छन् ।